Izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-20% xa uthenga i-iPhone okanye enye imveliso ye-Apple | IPhone iindaba
Ixesha leKrisimesi liyasondela, ukongeza iApple iveza imfazwe elungileyo yeemveliso ezintsha. Ngayo yonke le nto, mhlawumbi lixesha elifanelekileyo lokuthatha ithuba kwintengiso eqhelekileyo yexesha lokuhlaziya iimveliso zethu zeApple kwaye ke sizuze ekusebenzeni nasekuveliseni. Kungenxa yokuba inyani idlulela ngaphaya kotshintsho lokonwaba, kwaye loo nto kukuba abo basebenza neApple suite bahlala bezazi ezi ndidi zokunikezela ukuze sihlaziye iimveliso zethu xa kufanelekile kwaye siphucule imveliso yethu kunye nokusebenza ngokwabo.
UFnac usandula ukubhengeza ezinye Imicimbi yangaphambi koMnyama ngoLwesihlanu loo nto ayiyi kushiya nabani na ongakhathaliyo, kukuba uya konga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 Kwiimveliso ezininzi zohlobo lweCupertino, sikuxelela indlela yokonga kangangoko kunokwenzeka.
NgoLwesihlanu omnyama kubhiyozelwa usuku olulandelayo emva kweholide yombulelo eMelika, nangona kunjalo, siwuzuzile lo mkhwa ulungileyo. Kodwa kuyabonakala ukuba, ixesha lokubonelelwa liqala ukungonelanga, lelona xesha linamandla lokuthenga kwaye ngenxa yoko Iinkampani ezinje ngeFnac zinobubele ngokwaneleyo ukuba zingaqhubela phambili kwaye zandise izibonelelo zazo ukuze ungaphoswa yiyo nantoni na kwaye unokufumana zonke iimveliso ozifunayo, ezinezibonelelo ezingaphezulu kunangaphambili.
Ngapha koko, nkqu neApple, ngokuchaseneyo nemigaqo yayo, ibhengeze lo nyaka ukuba iyazibandakanya ne-Black Friday craze, yiyo loo nto inika abasebenzisi bayo inkuthazo enomdla yokufumana izixhobo zabo. Kodwa namhlanje, esona sipho silungileyo sinokufumana kwiMac, kwiPad Pro nakwiimveliso ze-iPhone zezona zinikezelwa nguFnac, nge ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 kwiimveliso ezikhethiweyo ukuba abayi kushiya nabani na ongakhathaliyo.
1 Yintoni isaphulelo se-20% kwiimveliso ze-Apple eFnac?
2 Ezona mveliso zinomdla
2.1 Ixesha lokuhamba kwi-iPad ene-2GB ye-RAM
2.2 I-iMac epheleleyo engama-21,5-intshi ngexabiso elingenakuphikiswa
2.3 I-Macbook Air njengokuba ungazange uyibone ngaphambili
2.4 Asilibali i-iPhone, ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
Yintoni isaphulelo se-20% kwiimveliso ze-Apple eFnac?
Okwangoku kude kube nguNovemba 21, kokubini kwiivenkile ezibonakalayo nakwivenkile ekwi-intanethi ye-Fnac, singasonwabela isaphulelo se-20% kwiimveliso zeMac (I-15% + 5% yobulungu). Yintoni ebhalwe njengesibonelelo esikhethekileyo sokuhlaziya iimveliso zeApple, ezinje ngokuhamba kwi-retina MacBook enika iziphumo ezintle, okanye uthathe isigqibo kuluhlu lwe-Air 2 ye-iPad ukuphucula imveliso yethu emsebenzini.
Kwakhona, Zonke iimveliso ezithengiswa kwi-Fnac ziya kuba nokuBhaliswa kweOfisi 365 yobuqu ifakiwe simahla kwi-Mac yakho.
Ezona mveliso zinomdla
Ixesha lokuhamba kwi-iPad ene-2GB ye-RAM
Siqala nge-iPad Air 2, siyakhumbula ukuba ine-processor elingana naleyo ye-iPhone 6s malunga nesantya sokuqhubekeka, sikhatshwa yi-2GB ye-RAM kunye ne-GPU emangalisayo, yiyo loo nto ukufumana i-iPad Air 2 siza kuyibona igubungela zonke iimfuno zethu, kwaye ngokunyanisekileyo, ungalubona utshintsho kwi-2GB ye-RAM kwiimveliso ze-iOS.
Ke ngoko, ukuba une-iPad ene-1GB ye-RAM, okanye ufuna nje ukunika i-iPad ngokusebenza okumangalisayo, ungaphoswa sisibonelelo sikaFnac.
Ukongeza, uya kuba nakho ukungena ngokupheleleyo kuluhlu lwe-Pro ye-iPad, kuba kwizibonelelo ezikhoyo siya kufumana ulondolozo lweVAT kwizixhobo ezininzi zePad Pro, ukwazi ukufumana IPad Pro 12,9 ″ 32GB nge- € 1008,33 kuphela
Ikhonkco | i-iPad enesaphulelo
I-iMac epheleleyo engama-21,5-intshi ngexabiso elingenakuphikiswa
Ngaba unayo i-Apple MacBook kwaye ujonge idesktop? Awuzange ube nayo imveliso yeMac kwaye ujonge izizathu? Soze sinyanzele ukuba sikuqinisekise, kwaye kunjalo iMac eyi-12,5-intshi iMac iprosesa ye-Intel i5 kunye ne-8GB ye-LPDDR3 RAM ngexabiso elihlekayo, yi- € 1088,10 nje. Asidlali, iphaneli yomgangatho omangalisayo njengalowo unikezelwa yiMac Zonke-In-One.Ukuba uneshishini okanye ufuna ikhompyuter ukuze usebenze ekhaya, awusoze ufumane isivumelwano esingcono seMac.
Thenga | iMac enesaphulelo
I-Macbook Air njengokuba ungazange uyibone ngaphambili
Ukuba awukhange ulukuhlwe sisicwangciso sedesktop, kukho into kubo bonke abaphulaphuli, kwaye kukuba eFnac singayifumana le mihla iminyaka emininzi yayiyiflegi yeApple, IMacbook AiI-128GB r ngokutsha ngokukhawuleza SSD, Iscreen se I-13,3 intshi, iprosesa ye-Intel Core i5 kunye ne-4GB ye-RAM ye- € 989,10 kuphela.
Ukuba unayo iMacBook yokugcina ngomatshini, awuyazi into oyiphosileyo, le processor kunye ne-SSD iya kwenza ukuba iMacBook Air ibhabhe, ukuba sidibanisa ukusebenza kwebhetri, kude nakuphi na okunye ukuthengiswa kwintengiso.
Ngaphandle kwamathandabuzo, lithuba elihle lokuthenga Isaphulelo kwiMacBook Air.
Asilibali i-iPhone, ngexabiso eliphantsi kunangaphambili
Ukhetha, i-iPhone 6s okanye i-iPhone 5S ngexabiso lokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Ii-iPhone 6s ezingama-64GB ziya kufumaneka nge- € 644 nje Kwiphepha le-FNAC, ixabiso elimela ukugcinwa kwe-20% xa kuthelekiswa nexabiso lokuqala le- € 709. Siyakuqinisekisa ukuba awuyi kuyifumana ngexabiso eliphantsi, isixhobo esine-2GB ye-RAM kunye nekhamera ebukekayo, sikhatshwa yitekhnoloji entsha ye-Apple yeTouch kunye nesenzwa somnwe wesibini. Awusayi kufumana sizathu sokuba ungamfumani ngoku.
Kodwa ayisiyiyo kuphela, kwaye yiyo leyo I-iPhone 5s ine-16GB yeendleko zokugcina ixabiso elincinci le- € 314, isixhobo esiya kuthi sihlangabezane neemfuno zabasebenzisi abahleli kwi-4-intshi yokufunda ngomnwe kunye ne-M7 processor co-processor yeyona nto ifunwa kakhulu.
Thenga | nikela nge-iPhone
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Izaphulelo ziqala: I-iPhone 6s isaphulelo kwi-Fnac's Pre-Black Friday
Umoya we-ipad 2 wandibiza nge- € 410 kunyaka ophelileyo kwi-mediamark ngesaphulelo somfundi ...
Ixabiso le-iPad Air 2 kufuneka lingalunganga. Ndisandula ukuyithenga kwiVenkile yeApple nge-32 GB nge- € 429. Ke kwi-16Gb ayinakuba yi-440 €
Impazamo, i-Air 2 ikwi-429 e-Fnac, besithetha nge-Pro Pro.
Oku kubizwa ngokuba yintengiso okanye ugaxekile. Kwaye ngaphezulu ukunika amaxabiso abiza kakhulu kunezinye iivenkile ezisebenzisa njengesizathu "awuyi kuzifumana zitshiphu."
Ukugxila kwiFirefox, isikhangeli esigxile kubucala